DVD Creator Maka Apple
1. Ọkụ iPhone video ka DVD
2. Ọkụ iPad Mini2 video ka DVD
3. Ọkụ iPad video ka DVD
4. Ọkụ iPad Air video ka DVD
5. tọghata iTunes video ka DVD
Ò dekọrọ otu ma ọ bụ karịa vidiyo na iPhone ma na-achọ na-ekiri ha na TV? M na ọ bụ adịghị mfe ọrụ maka a mbido. Ọfọn, mee ka a ogologo akụkọ mkpụmkpụ. Ị mkpa apụ ịkpali iPhone video gị na kọmputa na mgbe ahụ ọkụ iPhone video ka DVD na DVD Onye Okike software. Isiokwu a na-ewebata a ngwọta zuru ezu nyefee iPhone video ka Mac ma ọ bụ PC na ọkụ video ka DVD nke na-ekiri na TV. Ị ga-agaghịkwa onwe gị mgbe ị na-ahụ otú mfe ọ pụrụ ịbụ na-esure iPhone ka DVD.
Part m: Nyefee iPhone video ka Mac ma ọ bụ PC
Part II: Ọkụ iPhone video ka DVD na DVD Creator
Ihe ị chọrọ ka ọkụ iPhone video ka DVD
1. iPhone na kọmputa transfer ngwá ọrụ
2. DVD Onye Okike software
3. DVD burner ngwaike
4. Ò Kwekọrọ n'Ozizi DVD discs (DVD-R-atụ aro)
Dị ka m mara, ị nwere ike kpọmkwem ọkụ video ka DVD on iPhone ma ọ bụ n'ime ime obodo akara si iPhone. Ya mere, ị kwesịrị ị na mbụ nyefee video si gị iPhone na kọmputa. Ọ dị mfe na iPhone transfer dị ka Wondershare TunesGo Ochie (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo Ochie (Win).
Dị nnọọ jikọọ gị iPhone na kọmputa site na iji eriri USB. Ke akpan window nke Mac version, pịa Videos na ekpe sidebar. Pịa a video Atiya ịbanye ya management window. Mgbe họọrọ videos ị chọrọ ọkụ, pịa Export mbupụ ha gị Mac. Ọ bụrụ na ị na-eji Windows version, ị dị nnọọ mkpa pịa Media na ekpe kọlụm. N'otu aka ahụ, na-ahọrọ a video ụdị na pịa ya. pịa Mbupụ na mbupụ họọrọ videos gị Windows PC.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị kwadoo ndị iPhone MP4 faịlụ n'ihu ebufe, ị nwere ike ozugbo ọkụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na kọmputa na-DVD. Dị nnọọ na-ezo aka MP4 ka DVD Guide.
Part II: Ọkụ iPhone video ka DVD na DVD Creator (iPhone 6 gbakwunyere gụnyere)
Ngwọta 1: Iji a nnọọ powerfull DVD burner isure iPhone video ka DVD
Ngwọta 2: Iji oké DVD Creator isure iPhone video ka DVD
Ihe m ga-eji na-esure iPhone vidiyo na DVD bụ Wondershare DVD Creator nke bụ a kemfe ngwá ọrụ iji tọghata na ọkụ niile ewu foto na vidiyo na DVD ngwa ngwa, n'ezie gụnyere iPhone si MOV videos. Ị nwere ike nweta ya na Mac App Store ma ọ bụ download ya ebe a.
Ugbu a na-agbaso mfe nzọụkwụ iji tọghata na ọkụ iPhone video ka DVD ihe niile na-na-otu DVD Onye Okike (iPhone 5 na-akwado).
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu iPhone MOV videos ka usoro ihe omume
Download na wụnye DVD Creator for Mac, na ị ga-ahụ a welcome ihuenyo. Pịa "Mepụta a New Project" ị ga-ahụ bụ isi window dị ka n'okpuru.
E nwere ụzọ abụọ ịgbakwunye iPhone videos: ikpuru MOV faịlụ site na Finder ka usoro ihe omume ma ọ bụ pịa "+" button ịchọta ha na kọmputa. Ị nwere ike pịa "elu" na "ala" buttons ka ịhazie play iji.
Nzọụkwụ 2: Dezie iPhone video (Nhọrọ)
Dezie iPhone video, n'ihi na ihe atụ bugharia, ewepụtụ, gbawara n'etiti, dị nnọọ họrọ ya wee pịa "Dezie". All mgbanwe ị na-mere nwere ike hụrụ n'otu ntabi na nri window.
Nzọụkwụ 3: Mee ka a DVD menu maka iPhone video DVD
N'ime 90 animated na static DVD menus na-nyere. Iji mee ka a omenala menu, dị nnọọ pịa "NchNhr" button na mgbe ahụ họrọ a kwesịrị ekwesị menu ịke ka omenala a DVD m maka gị DVD, wee hazie ya ruo mgbe ị nwere afọ ojuju. Iji gbanyụọ menu, dị nnọọ họrọ Mba menu site na listi.
Nzọụkwụ 4: Preview na ọkụ iPhone video ka DVD (iPhone 5 na-akwado)
Mgbe ị na-okokụre, ịhụchalụ gị iPhone video DVD nkiri site na ịpị "Preview" button. Ọ bụrụ na ọ bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ, pịa "Ọkụ", na-ahọrọ "DVD Disc" nhọrọ si ndọpụta menu. Aha ọhụrụ gị DVD na kụrụ "Save". Ọ ga-mkpa oge ụfọdụ (nkeji ka otu awa) dabere na gị DVD ogologo.
iPhone ka DVD Atụmatụ: Ọ bụrụ na gị DVD ngo bụ ibu karịa 4.7G na ị na-enweghị a DVD9 diski, dị nnọọ fanye a D5 diski kama, usoro ihe omume ga mpikota onu ya na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 5: Play iPhone video on TV
Mgbe ọkụ zuru ezu, fanye DVD diski n'ụlọ gị DVD ọkpụkpọ na ị ga-ahụ na iPhone video on TV ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga ziri ezi. I nwekwara ike-egwu DVD diski na DVD mbanye na kọmputa gị tupu na-egwuri egwu ọkpụkpọ DVD.
Olee otú Ọkụ Sony Bloggie vidiyo na DVD
Ekiri Fast na-ewe oké iwe Movie Series Online na Free
> Resource> iPhone> Olee Ọkụ iPhone Video ka DVD Watch na TV